लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका कोरोनाकालीन दुई लघुकथा - Lekhapadhi साहित्य/कला : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २७ भाद्र २०७८, आईतवार १७:२४ मा प्रकाशित
चिनको बुहान प्रान्तबाट शुरु भयो भनिएको कोभिड–१९ नामको कोरोना भाइरस एक वर्ष पूरा गरेर दोस्रो वर्षको चौथो महिनामा दगुरिरहेथ्यो । सानादेखि ठुलसम्म धेरैको घर शून्य पारिसकेको थियो । हुनेखानेहरू अस्पताल नै ठेक्का हानेर बाँच्ने प्रयासमा थिए । नहुनेहरू आफ्ना इष्टकूल पुकार्दै अन्तिम सहारा सरकारी अस्पतालको उस्ताउस्तै बिरामीले खचाखच भुई ओगट्न विवश थिए ।
सरकारले लकडाउन गर्ने जोहो गरिसकेको थियो । रोजिरोटी खोज्दै भारत छिरेका मजदुरहरू एकातिर तिव्र रूपमा फैलिएको महामारीका कारण रोजगारी गुमाउनु परेको अर्कोतिर रोगले लैजाने हो कि भन्ने आशंकाले स्वदेश फर्किदै थिए ।
यता ऊ “को भन्दा को कम” अभियानमा सरिक मान्छेहरूको भिड ओसारपसार गर्थ्यो । ऊ पेशाले चालक थियो । सरकारले भनेको स्वास्थ्य मापदण्ड त हुनेखानेको लागि हो । ऊ त बिहान साँझको छाक टार्न श्रीमतीले सिलाएको कपडाको टालो मास्क भन्थ्यो, अनुहारभर त्यही बेर्दथ्यो । सामाजिक दुरी कायम गरोस्, अन्न र पेटको दुरी बढ्थ्यो ।
“मैले भनेको मानेनौ । रोगले समातिहाल्यो । तिमीलाई केही भैहाल्यो भने हामी त जिउँदै मर्छौ ।” आँखाभरी आँसु बोकेर श्रीमतीले एम्बुलेन्समा चढ्ने बेला भनेकी थिई, उसले सम्झ्यो ।
अचानक अस्पतालमा हडकम्प मच्चियो । कुन्नी को हो, ठूलै नेता मान्छेले बेड पाएनछ । अस्पताल प्रशासन, सरकारविरुद्ध नाराजुलुस चल्यो ।
ऊ अस्पतालको एउटा कुनामा मुखमा प्राणवायुको तार जोडेर पल्टिएको थियो । अचानक अस्पतालमा हडकम्प मच्चियो । कुन्नी को हो, ठूलै नेता मान्छेले बेड पाएनछ । अस्पताल प्रशासन, सरकारविरुद्ध नाराजुलुस चल्यो । बाहिरको हुलहुज्जतले बिरामीहरूमा थप निराशा थप्ने काम गर्दैथ्यो । तनावग्रस्त अवस्था निकै बेर रह्यो ।
अलिपछि त्यो मान्छे उसको छेवैमा भर्ती हुन आइपुग्यो ।
“सबै निकम्मा छन् कुनै प्रबन्ध नै छैन ।” ऊ अझै कराइरहेको थियो । ऊ पूर्व नेता थियो । हिजोसम्म हुलका हुल मान्छे बोकेर जुलुस सजाउनेमा पथ्र्यो ।
उसले मनमनै भन्यो, “कालो बादल फैलाउनुमा तपाईंको पनि सहयोग थियो । अँध्यारोलाई सरापेर के हुन्छ ? आफ्नो भागको दियो त आफैले बाल्न सक्नुपर्छ ।“
“रामेशलाई कोरोना भएछ नि !“ टोलभरी हल्ला भुसको आगो झै फैलियो । रामेशका बाबू बजारमा मेडिकल स्टोरमा काम गर्थे । कोरोनाको दोस्रो लहर तिव्र भएपछि उनले घर आउनै छोडेका थिए । आमा र एउटी बहिनीको साथमा रामेश घरभित्र सुरक्षित बसेका थिए । सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर आमा घर बाहिरको एक्लै किनमेलको काम गर्थिन ।
आज रासन लिन जाँदा सबैले दुरदुर गरे । उनी छक्क परिन् । पसलेले सामान दिन इन्कार त गरेन तर “पैसा पछि दिनु” भन्दै उनको हातको पैसा लिएन ।
“महिनौं भैसक्यो एकचोटि भेटाैं न !”
“हुँदैन हो ! अस्तिदेखि लगातार तीन दिन ज्वरो आयो । रिपोर्ट जाँच गराउन भनेर दुई घण्टा लाइनमा सँगै भएको अगाडिको मान्छे रिपोर्ट नहेरेर हिजो बित्यो भन्छन् । आफुलाई घरभित्रै डर लागिरहेको छ । तिमी भेट्ने कुरा गर्छौं ?“
“ए, हो हैं ! त्यसो भए त हुँदैन । आफ्नो ख्याल गर्नु !” कलेजमा सँगै पढ्दाका साथी विनिता र रामेश टेलीफोनमा कुरा गर्दै थिए ।
“लौ बितायो, त्यो बिनिता त हिजो हरिशसँग अँगालो हालेर घुम्दै थिई !” आमाको होस उड्यो ।
बहिनीले अनुमान लगाई, “यो सबै हल्ला फैलाउने बिनिता नै हो ।”
उसले दाइलाई हकारी, “दादा तँ कहिले गइस टेस्ट गराउन ?”
“यसरी शंकास्पद व्यक्तिले लापरवाही गर्दा नै यो रोग फैलिरहेछ ।”
“दादा ! तेरी प्रेमिका त तँलाई कोरोना भयो भनेर हरिशसँग लागिछ !” बहिनी चुट्की बजाउँदै आमा भएतिर दगुरी ।
(लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको बसोबास धनगढी, कैलालीमा रहेका छ । समकालीन लघुकथा लेखनमा अत्यन्त सक्रिय पौडेल आधुनिक नेपाली लघुकथा पेजका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ ।)